Akanikwe ithuba uMokwena: Issa Sarr
OWAYENGUMDLALI we-Orlando Pirates * -Issa Sarr ubona iPirates izoyiwina indebe iqeqeshwa nguRulani Mokwena
NDUDUZO DLADLA | September 6, 2019
ZIZOBUYA izinsuku zenjabulo kwi-Orlando Pirates, inqobo nje uma abalandeli bezonika uRulani Mokwena ithuba.
Lokhu kushiwo u-Issa Sarr, owayegijimela iBhakabhaka phakathi kuka-2014 no-2017.
U-Sarr, waseSenegal, osegijimela Uthongathi FC kwiGladAfrica Championship, ubona iBucs isezandleni ezifudumele kuMokwena kodwa kufanele kube nokubekezela kubalande.
Sekuphele imidlalo eyisithupha iPirates inganqobi, nosekuholele ekutheni iphume emiqhudelwaneni emibili okuyiMTN 8 neCAF Champions League.
UMokwena uyibambe ngezimpondo emuva kokwesula isigubhukane komqeqeshi abeyiphini lakhe, uMilutin “Micho” Sredojevic waseSerbia, osepheka iZamalek yase-Egypt.
Ngokusho kuka-Sarr akonakele lutho kwiBucs, kuphela nje akunikwe ithuba uMokwena kukhona okuhle okuzokwenzeka.
“Kuningi osekushintshile kwiPirates, nabadlali basebenza kanzima kakhulu futhi banethalente elisabekayo. Okungijabulisa kakhulu wukuthi nangaphandle kwenkundla azikho izinto ezibhalwayo noma ezishiwo ngabadlali bePirates. Lokhu kuyizinkomba zokuthi iqembu lenza kahle. Kungakho ngithi akanikwe ithuba uRulani ngoba uza kahle. Okubalulekile wukuthi naye njengomqeqeshi akhumbule ukuthi iPirates akulona iqembu elincane kodwa ngiyamethemba. Yingakho ngiqina idolo ukuthi kukhona okuyisicoco okuzoqukulwa yiPirates kule sizini. Okunye okungihlaba umxhwele ngoRulani wukuthi unohlelo lokuziqeqesha oluqondile futhi unamaqhinga amahle, okuyothi engahlangana ashaye abantu,” kusho uSarr.
Kuphele iminyaka emibili uSarr engabonakali ebholeni. Ngokusho kwakhe ubexinwe amabhizinisi. Impilo yakhe kayisekho eSenegal kodwa konke okwakhe kuseGoli futhi uzibona engowakuleli ngoba usenepasi laseNingizimu Afrika.
Ebuzwa ukuthi ngabe ukuhlukana kwakhe nePirates eminyakeni emibili edlule kwaba ngokuhle noma kwase kukhona lapho sekushayiswana khona, uthe: “Savumelana kahle nosihlalo * -Irvin Khoza ukuthi angidedele, akubanga khona zinkinga. Nokho ngithwale kanzima ngifuna iqembu, ngiziqeqesha ngedwa kodwa sekugcine kulungile njengoba sengilapha kuThongathi”.
U-Sarr ubekhona eqenjini uThongathi olubhaxabule ngo 3-0 i-Ajax Cape Town ngeledlule.